ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုူင်ငံတော် အကြောင်း သိကောင်းစ၇ာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုူင်ငံတော် အကြောင်း သိကောင်းစ၇ာ
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုူင်ငံတော် အကြောင်း သိကောင်းစ၇ာ
- aung htoo
Posted by aung htoo on Oct 17, 2010 in News |7comments
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုူင်ငံတော် ဆိုတာက တိုင်း၇င်းသားလူမျိူးပေါင်းဆုံ အတူတကွ မှီတည်းနေထိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်ပါသည် မြန်မာနိုူင်ငံအကြောင်း ပြော၇မယ်ဆို၇င် categories လေးခုနဲ ပြော၇မှာပါ ဘာတွေလဲဆိုတော့ နိုင်ငံေ၇း စီးပွားေ၇း ကျမ်းမာေ၇း နှင့် လူမှူေ၇း တို့ဖြစ်ပါသည် ဘာလိုအခုလို ပြော၇လဲဆို၇င် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံေ၇းကောင်းမှ နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်သော အကြီးအကဲ နိုင်ငံ၇ဲ leaders တွေကောင်မှ စီးပွားေ၇းဆိုတာကောင်း နှိုင်မှာ စီးပွားေ၇းကောင်းမှ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ ဟာ သူတို့၇ဲ့ ကျမ်းမာေ၇းကို စောင့်ေ၇ှာက်နိုင်မှာ အဲဒီမှာ နိုင်ငံေ၇း စီးပွားေ၇း ကျမ်းမာေ၇း တခုမှ မကောင်း၇င် အဲဒီနိုင်ငံမှာ၇ှိတဲ့ လူတွေ၇ဲ လူမှူေ၇း (ကိုယ်ကျင့်တ၇ား လူမှူပေါင်းသင်း ဆက်ဆံေ၇း) တွေဟာ ဘယ်လိုမှကောင်းလာနိုင် စ၇ာအကြောင်းမ၇ှိဘူး categories လေးခုထဲက ပထမတစ်ခုကနေစပြော၇င် အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ နိုင်ငံေ၇းဆိုတာ အာဏာ၇ူးစစ်ဘီလူး အဆိုး၇က တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေပြီး နိုင်ငံကို ချယ်လှည်ချင်တိုင်း ချယ်လှည် ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးယော ဆိုတဲအတိုင်း ၇ာဇပလင် ဖင်မှာကပ်နေတော့ ဘယ်ဆင်းချင်တော့မလဲ ဒီအပြင် အထက်ဖားအောက်ဖိ သု့၇ဲနောက်လိုက်ခွေးတွေ ကလဲလူတွေကိုမြငတိုင်းကိုက်ချင်တယ် တဆက်တည်းမှာပဲ လက်တစုပ်စာလူတစုက စစ်ဘီလူးပညာမဲတွေနဲပေါင်းပြီး သူတို၇ဲ့ကိုယ်ကျိုးအတွက် နိုင်ငံ၇ဲ့အ၇င်းအမြစ် သယံဇာတတွေကို ထုပ်ဖေါ်ေ၇ာင်းချစားသောက်နေတယ် နိုင်ငံ၇ဲ့အ၇င်းအမြစ် သယံဇာတတွေဆိုတာက ထုပ်ဖေါ်ေ၇ာင်းချ၇မယ်ဆိုတာ မြှန်ပါတယ် သိုသော် အဲဒီဟာတွေက နိုင်ငံနဲပြည်သူအတွက်ပဲ ဖြစ်၇မယ် not for your company (Htoo, Max and the anothers companies like government parteners). အဲဒီမှာ နိုင်ငံေ၇းနဲ စီးပွားေ၇းက တော့လမ်းဆုံးသွားပြီ တတိယ category ကတော့ ကျမ်းမာေ၇းပါပဲ မြန်မာနိုင်ငံ၇ဲ့ ထက်ဝက်ကျော်သော လူဦးေ၇ယာ ကျေး၇ွာတွေမှာနေထိုင်ကြပါတယ် သိကြတဲအတိုင်းပဲ မြိုမှာတောင်မှ လျှစ်စစ်မီးက မှန်တာမဟုတ် (နေပြည်တော်မပါ) အဲမှာတင်သိသာနေပါပြီ အဆိုး၇၇ဲ့စေတနာတွေကို လမ်းခ၇ီးဆက်သွယ်ေ၇း ဆို၇င်လဲ ဘု၇ားဆူးပါပဲ ကျွန်တော်၇ဲကိုယ်တွေကိုပြော၇၇င် ကျွန်တော်က ၇ွာသားပါ ကျွန်တော်၇ွာက ပဲခူးတိုင်း ဧ၇ာဝတီမြစ်နဘေးမှာ တည်၇ှိပါတယ် ၇ွာမှာဆို၇င် သူနာပြုဆ၇ာမ တစ်ယောက်ပဲ၇ှိတယ် ဒါတောင် ကျွန်တော်၇ွာကတော်တော်ကံကောင်းတယ် ဆို၇မယ် အနီးအနားက၇ွာတွေမှာဆို၇င်မ၇ှိဘူး အဲဒီသူနာပြုဆ၇ာမကပဲတ၇ွာဝင် တ၇ွာထွက် လျှောက်သွားပြီးဆေးကု၇တယ် ဆ၇ာမ မနိုင်တဲေ၇ာဂါဆို၇င်တော မြိုတက်ပြီး ကု၇တော့တာပေါ့ တချိုလူတွေဆို၇င် ဆင်း၇ဲကြတယ် ဆေးကုချင်ကြတယ် မြိုတက်ပြီး ဒါပေမဲ ပိုက်ဆံမ၇ှိကြဘူး ဆေး၇ုံတွေမှာဆောင်ပုဒ်ေ၇းထားတာတွေမြင်၇ပါတယ် စ၇ိပ်မျှပေးကျမ်းမာေ၇းတဲ မျှတော့ပေးပါတယ် 80% လောက်ကိုကပေး၇တယ် ဒီကြားထဲ ဆင်း၇ဲတဲလူဆို၇င် သူနာပြုဆ၇ာမတွေက ဂ၇ုကိုမဆိုက်ဘူး နောက်ဆုံး category ကတော့ လူမှူေ၇းပါ ဒီလိုမျိုးအဆိုး၇၇ဲ အဖိအနိုပ်ခံ လက်အောက်မှာနေ နေ၇တဲဘဝ ယူနီဖောင်းမြင်တိုင်း ဘာမှန်းမသိကြောက်နေ၇တဲ့ဘဝ စီးပွားေ၇းဆို၇င်လဲ ချွတ်ချုံကြ ကျမ်းမာေ၇းဆို၇င် ဘာအာမခံချက်မှမ၇ှိ ဒီလိုလူမျိုးတွေမှာ လူမှူေ၇းဆိုတာ ကောင်းနှိုင်ပမလား လူတိုင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး လက်တဆုပ်စာလူတစုကသာ ချမ်းသာပြီး လူအများစုမှာတော့ ဝမ်းေ၇းအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲ ၇ုမ်းကန်လှုပ်၇ှားနေ၇တယ် လူဆိုတာလောဘသားတွေပဲ ၇ှိတာထက် ပိုလိုချင်ကြတာ ထုံးစံပါပဲ ဒါပေမဲ ၇ှာဖွေစားသောက်၇တာက ခက်ခဲတယ် ကြမ်းတမ်းတယ်ဆိုတော့ နည်းလမ်းမျိုးဆုံသုံးတော့တာပဲ သမာသောနည်းလမ်း မသမာသောနည်းလမ်း အကုန်သုံးတော့တာပဲ နောက်ဆုံး အမှီး၇အမှီးစား ခေါင်း၇ခေါင်းစား ဆိုတဲ့အလုပ်တွေပါလုပ်တော့တာပဲ လူတိုင်းကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ၇ှိပါတယ်၇ိုး၇ိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသော လူများကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ လူမှူေ၇းအကြောင်းကိုထပ်ပြော၇၇င် mandalay gazette မှာပဲ post တစ်ခုဖတ်ဖူးတယ် ဘာလဲဆို တော့ လူတစ်ယောက်က from Yangon to Mandalay ကို လေယဉ်နဲ သွားတယ် လေယဉ်ပေါ်တက်ခါနီး ကားနဲတဆင့် သွား၇တယ် ကားပေါ်တက်တော့ မြန်မာတွေက အလုအ၇က် တက်ကြတယ် ဒါပေမဲ နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့အေးဆေးပဲ ဆိုလိုချင်တာက နိုင်ငံခြားသားတွေအမြင်မှာတော့ မြန်မာတွေလူမှူေ၇းမသိတက် နားမလည်ဘူးပေါ့နော် အဲဒိနေ၇ာတင်မကပါဘူး နေ၇ာအတော်များများမှာ ဒီလိုလုပ်နေကြပါ ဘာလိုမြန်မာတွေဒီလိုလုပ်၇တာလဲဆိုတော့ သူတိုတွေ၇ဲစိတ်ထဲမှာ ငါဦးမ ငါအ၇င်ေ၇ာက်မ ငါ၇မှာ ဆို တဲစိတ် ဝင်နေလိုပဲ အားလုံးကိုချုံကြည်မယ်ဆို၇င် ဘာကြောင့် စီးပွားေ၇းတွေမကောင်းတာလဲ ကျမ်းမာေ၇းတွေချို၇ွင်းတာလဲ အကျင့်သိလတွေပျက်ပြားတာလဲဆိုတော့ အဓိကအချက်ကတော့ တစ်ချက်ပဲ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူတွေမကောင်းလိုပဲ ကောင်းအောင်ဘ်ာလိုလုပ်မလဲဆို၇င်တော့ နည်းစနစ်အဟောင်းကြီးပဲ စစ်ဘီလူးတွေကိုမောင်းထုပ်၇မှာပါ စာဖတ်သူကတော့ထင်မှာပေါ့ ဟင်လာပြန်ပြီဒါပဲ ပြီးတော့မေးမယ် ဘယ်လိုလုပ်ိုမောင်းထုပ်မှာလဲ တချိုဆို၇င် မေးတောင်မေးချင်မှာမဟုတ်ဘူး ဘာလိုလဲဆိုတော့ more than 20 years nothing happen in BURMA. ဘုန်တော်ကြီးတပါးမိန်ခဲတာကိုပြေပြချင်ပါတယ် “အလုပ်မပါဗလာတောင်းတော့ အာညောင်း၇ုံပဲ၇ှိုတယ်” ဘုန်းဘုန်းပြောတာကတော့ နိဗာန်ေ၇ာက်ကြောင်းတ၇ားပါ ဘု၇ား၇ှိခိုးတိုင်း နိဗာန်ေ၇ာက်၇ပါလို၏ဘု၇ား ဆုသာတောင်းနေတာ ကျင်ကြံ အားထုပ် မှူမ၇ှိ၇င် နိဗာန်ကိုဘယ်ေ၇ာက်နိုင်ပမလဲ ထို့နည်းတူ ဒီမိုကေ၇စီ ၇၇န်အော်နေလိုမဖြစ်တော့ဘူး အလုပ်နဲလက်တွေပြဖိုအချိန်တန်ပြီ ဥပမာပြော၇၇င် တုတ်၇ှိတဲလူနဲ လက်ဗလာလူနဲ ခိုက်၇န်ဖြစ်၇င် တုတ်၇ှိတဲလူကနိုင်၇န်အခွင်အေ၇းပိုတယ် တုတ်နဲ ဓားနဲ၇ှင် ဓားကသာတယ် ဓားနဲသေနပ်နဲ ဆို၇င်တော့ သိတဲအတိုင်းပဲ သေနပ်၇ှိတဲလူကတော့ သေနပ်၇ှိတဲသူအချင်းချင်းပဲ ကြောက်မယ် အသက်မသေပဲအားလုံးအဆင်ပြေ၇င်တောအကောင်းဆုံးပေါ ဒါပေမဲ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ပြီ ဘာမဖြစ်မလာပါလား ပြောချင်တာက မျိုးဆက်တခုအဆုံး၇ှုံခံ၇င်ခံ၇မယ် နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက် ပြောတော့သာလွယ်တာပါ လုပ်၇န်အတွက်တော့ မလွယ်ဘူးဆိုတာသိပါတယ် ၇င်ထဲမှာ၇ှိတာတွေကို မျှဝေလိုက်ထာပါ
About aung htoo
Aung Htoo has written 1 post in this Website..
View all posts by aung htoo →
ဓားတွေ သေနတ်တွေကတော့ ဟုတ်ပါပြီ
ကျွန်တော်လည်း လောက်စာလုံး အလုံး ခြောက်ထောင်လောက် လုံးထားပြီးသား ရယ်ဒီရှိပါတယ်
ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဗဟိုကနေ ဆက်လက်ညွန်ကြားပါခင်ဗျား
အကြောင်းမပြန်ရင် နောက်မလာနဲ့ 
အခြားအဖွဲ့ ဝင်တွေကိုလည်း အကြောင်းကြားပါ
အဲဒီကိစ္စကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ထားပါတယ်..။ ဘယ့်တော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်မည်လဲ..?။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောရရင်တော့ ၀မ်းနဲကြေကွဲဖွယ်ရာများသာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောရင် Military Regime ၊ Oppression ၊ Mrs. Michael Aeris ၊ Cronies တွေအကြောင်းတွေကသာများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ အထူးသဖြင့် နောက်မှ ပေါက်လာတဲ့ရွှေကြာပင်တွေဖြစ်တဲ့ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှားနဲ့ ထိုင်း တို့အထိ Level Ground အနေနဲ့ ဆက်ဆံလို့မရတော့တဲ့ အနေအထားမှာဖြစ်လာတယ်။ ဒါတွေဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ ဆိုတာ ကို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ Dignity ကို ထိန်းသ်ိမ်းလိုသူတွေက အဓိက ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေကိုရှာဖွေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အားနဲချက်တွေကို ပြောကြတဲ့နေရာမှာ Military Regime တစ်ခုထဲကိုပဲ အပြစ်ပုံချနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာမှားတယ်လို့ မဆိုသာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ အဓိက အချက်တွေထဲက တစ်ခုလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီ Military Regime ကလူတွေဟာ မြန်မာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လူသားတွေလဲဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ပြီး အမြင့်မားဆုံးကို ရောက်ရှိနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ မှားယွင်းမှုတွေကို ဘာကြောင့်လုပ်ကြတာလဲ။ ဥပမာ၊ အမေရိကန်သမ္မတဟောင် ဂျော့ဘုရှ် လိုဟာမျိုးပေါ့။ ဘာကြောင့်အမှားမှားအယွင်းယွင်း နဲ့ လူသန်းပေါင်းများစွာသေကြေပျက်စီးအောင် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့လဲပေါ့။ ဒီနေ့ခောတ် Military Regime ကို ဦးဆောင်ခဲ့သူတွေဟာ ၁၉၃၀ ခန့်မှာမွေးဖွားခဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဘ၀တွေဟာ စစ်တွေ၊ ဆင်းရဲမှုတွေ၊ နှိမ်ချမှုတွေ၊ ပြည်တွင်းစစ်တွေ ကြားထဲမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူများဖြစ်ပြီး။ သူတို့ရဲ့ လူ့ဘ၀ပန်းတိုင်တွေဟာ နောက်ဆုံးတော့ ဆွေမျိုးတစ်စုကောင်းစားရေး ဘက်ကိုသာရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရတာဟာ သူတို့ရဲ့ အသိဥာဏ်ကြီးထွားခွင့် က သူတို့ကျင်လည်ရတဲ့ ဘ၀ထဲမှာ ကျဥ်းမြောင်းသွားလို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အသိဥာဏ်နဲလေလေ၊ ပိုပြီးကြောက်ရွံ့ လေလေ၊ ဒါကြောင့် နောင်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ဘ၀တွေမှာ အဆင်ပြေရလေအောင် လောဘကြီးရလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေဟာ အပေါင်းအသင်းမရှိဘဲ အထီးကျန်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး သံသယများ၊ ကြောက်ရွံ့မှုများနဲ့သာ ဆက်ဆံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့ အသက်က ၁၀၀ ထက်တော့မကြာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ပြီးရင် ဘယ်သူတွေဆက်လုပ်ကြမှာလဲ။ ဆက်လုပ်မဲ့လူတွေက ကော ရှင်ကြီးက ကျားထက်ဆိုးဖြစ်နေဦးမလား။ သေချာတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ ဘာမှ အဆင်သင့်မဖြစ်ခဲ့သေးဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီး အတိုက်အခံလုပ်ရင် ထောင်နန်းစံရဘို့ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ နေရင် ဘယ်လို နိုင်ငံခြားမျိုးကို သွားပြီး၊ ဘယ်လိုအသက်မွေးမယ်။ ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားရမယ်။ အမေရိကန်အစိုးရဖြစ်စေ၊ တရုတ်အစိုးရဖြစ်စေ၊ မြန်မာအစိုးရဖြစ်စေ ကျွန်တော်တို့ ဘာပဲပြောပြော အပွန်းရာလေးတောင်မဖြစ်ဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာကိုပဲလုပ်ရတော့မယ်။ နိုင်ငံတကာကိုဝင်ဆံ့မဲ့လူသားတွေကို မွေးထုတ်ပေးဘို့ပဲ။ လုပ်လို့ရနိုင်ပါ့မလားလို့ တစ်ချို့ကလည်း သံသယရှိတယ်။ ကျွန်တော် အမြင်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မှာ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်လေးတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါ ဟာ Information Technology ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြရင်၊ ပိုမိုထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်ရင် နဲနဲလေးတော့် ပြောင်းနိုင်မလားပဲ။
အကြံရပြီ…ဒီလိုလုပ်ပါလါး အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေသမ္မတဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြအာဖရိကနွယ်ဖွား အိုဘားမားတောင်သမ္မတဖြစ်သေးတာ အို…သမ္မတဖြစ်သွားလို့ကတော့…ဟင်း…
@asiamasters: I like your comment….
ပိုမိုထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်ရင် နဲနဲလေးတော့ ပြောင်းနိုင်မလားဆိုသာထက် ပိုပြီးပြောင်းလဲသွားမယ်ထင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီး အတိုက်အခံလုပ်ရင် ထောင်နန်းစံရဘို့ရှိတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ နေရင် ဘယ်လို နိုင်ငံခြားမျိုးကို သွားပြီး၊ ဘယ်လိုအသက်မွေးမယ်။ ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားရမယ်။ နိုင်ငံတကာကိုဝင်ဆံ့မဲ့လူသားတွေကို မွေးထုတ်ပေးဘို့ပဲ။ ကျွန်တော် အမြင်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မှာ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်လေးတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါ ဟာ Information Technology ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ အားလုံး နိုင်ငံခြားထွက်ကြ
ကျုပ်က အကျိုးဆောင်ပေးမယ် ရှင်းပြီလား။